Akụkọ - Ihe eji ebu ngwongwo na Europe
Akpa njem na Europe
Ozi ọma! Companylọ ọrụ anyị zigara ụlọ ọrụ isii na Europe n'izu a.
Suzhou Yuanda Commercial Equipment Co., Ltd. bụ onye nrụpụta raara nye ngwa ọrụ ultra, dị ka akwa ụlọ ahịa, trolleys, nkata ịzụ ahịa, akwụkwọ nri, akwụkwọ ndekọ ego, wdg. A na-ebupụ ngwaahịa na mba ofesi, na Yuanda shelves nwere 80% nke ahịa ndịda Europe.
Site na nkwụsi ike ma kwụsie ike, Yuanda tinyere ego iji wuo ụlọ ọrụ ọhụrụ na 2010, ma wusie ike na ntinye ego na ngwa ọrụ, iji mepụta usoro ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ, ịgbado ọkụ, mgbatị na mkpuchi ngwa ngwa na ụfọdụ akpaka ndị ọzọ. igwe, ebumnuche iji mezue ngwa ọrụ akpaka iji meziwanye ikike nke nrụpụta. Usoro nke ịmịpụta shelf dị ka ndị a ：
1. Rolgbagharị. E nwere ọtụtụ ụdị igwe eji eme ihe. Enwere igwe onyonyo di elu di ka nke eji eji ehi ehi agha, ma enwere kwa igwe ochie ndi eji emeputa ulo oru ma obu uloru. Ya ọrụ bụ tumadi tụgharịa a ụfọdụ obosara nke ígwè warara site a ebu n'ime chọrọ udi nke a ụfọdụ ogologo nke otu ngalaba, dị ka shelf ogidi, shelf ibé, wdg. Nke a bụkwa a dị nnọọ mkpa nzọụkwụ ke shelf mmepụta.
2. Ọnọdụ na ọkpọ ọkpọ. Dabere na mkpa ndị dị mkpa, a na-akụ ihe ndị akpọrọ akpọrọ na oghere ndị dị mkpa ebe ọ dị mkpa, dịka oghere asatọ ma ọ bụ oghere diamond nke nnukwu ọrụ, na oghere gbara gburugburu obe. Ọnọdụ nke ọkpọ ọkpọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ doro anya na eserese eserese, iji hụ na njikọta na arụmọrụ dị mma nke ọrụ shelf niile.
3. Ihulata (efere ígwè). Ọ bụrụ na shelf ahụ nwere efere ígwè, mgbe ahụ ọ dị mkpa ka ehulata nchara nchara. Otu bụ iji dozie efere nchara nchara n ’ụzọ nke ọma, nke ọzọ bụ ịkwalite ikike ibu ọrụ nke mbadamba nchara.
4. eldgbado ọkụ na polishing. Akụkụ ndị a haziri edozi ga-adị mkpa ịgbado ọkụ maka ịgbado ọkụ, dị ka kọlụm na mpempe ụkwụ nke shelf, beam na gripper. Nke a kwesịrị ịgbado ọkụ dịka ụkpụrụ mba dị mkpa si dị, a ga-enwerịrị ike ịgbado ọkụ na ngbanwe ikike. Mgbe ịgbado ọkụ ahụ mechara, nkwonkwo solder kwesịrị ịchacha mma iji mee ka mma nke shelf wee melite nchekwa nke shelf.
5. Ọgwụgwọ ihu. Elu ọgwụgwọ nke shelf na-agụnye pickling na phosphating, electrostatic spraying, mgbe nile okpomọkụ gwọọ, wdg
Post oge: Apr-15-2021